musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Hawaii COVID-19 Dambudziko reNgozi Kubva Kumusoro kuenda Pakati
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kamaainas • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Hawaii COVID mamiriro anovandudza
The Aloha Nyika yeHawaii yatama kubva kuHigh Risk kuenda kune Medium Risk nhasi pane iyo Covid Mutemo Zvino runyorwa.
Mhosva dzeHIVV-19 dzeHawaii, zvipatara, uye kufa zvave zvichiderera pamwedzi wapfuura.
Hurumende yakasvika mukuchengetedzwa kwemombe kubayiwa majekiseni zvinoenderana nehuwandu hwakagamuchira kanenge kamwe chete mukati memazuva mashoma apfuura.
Gavhuna weHawaii David Ige achiri kukurudzira kufamba kunogumira pakufamba kunoonekwa kuchidikanwa.
Covid Act Zvino inopa 5-ruvara ngozi mamaki kumatunhu nematare munyika dzese kuti vagari uye vakuru vehurumende vanzwisise zvirinani mamiriro eCOVID munzvimbo yavo. Iyo Act Zvino Coalition ndeye yakazvimiririra 501 (c) (3) isina purofiti yakavambwa nevanozvipira munaKurume 2020. Covid Act Ikozvino chirongwa chakanangidzirwa neCOVID kubatsira vanhu kuita sarudzo zvine ruzivo nekupa data rakakodzera nguva uye rakaringana nezve COVID muUS
Kwemazuva mashanu apfuura, Huwandu hweHawaii hwezviitiko, zvipatara, uye kufa zvave kudzikira. Honolulu County, Hawaii, yakashuma kuve nevashandi vane gumi nevatanhatu vane vanhu vakuru veICU. 156 akazadzwa nevasiri-COVID varwere uye makumi matatu nematatu vakazadzwa nevarwere veCOVID. Pakazara, 86 kubva pa33 (119%) vakazadzwa. Izvi zvinoratidza kumwe kugona kutora kuwedzera kwezviitiko zveCOVID.
Hurumende yakasvika mukuchengetedzwa kwemombe mukati memazuva mashoma apfuura neiyo nhomba yekudzivirira ye73.9% yevagari vanogamuchira mwero mumwe chete. MuDunhu reHonolulu, Hawaii, vanhu mazana manomwe nemazana masere nemazana masere nemazana masere nemakumi manomwe nenomwe (720,162%) vakagamuchira mukana mumwechete uye 73.9 (647,576%) vakabaiwa zvakakwana. Chero ani zvake angangoita makore gumi nemaviri anokodzera kubaiwa jekiseni. Vashoma pane 66.4% yevanhu vakagamuchira dosi vakasangana nemhedzisiro yakaipa.
Paavhareji, huwandu hwehutachiona muzvitsuwa zviri pa69% ine yakanaka bvunzo ye3%. Ikozvino pane 7.3 mitsva mitsva iri kutaurwa pa100,000.
Honolulu County, Hawaii, ine njodzi yakaderera kupfuura matunhu mazhinji eUS. Nharaunda dzine kukanganisika kwakanyanya dzakatove nehupfumi, hwemagariro, uye nemamiriro ezvinhu anogona kuita kuti zviome kupindura nekudzoka kubva pakuputika kweECOVID.
Kufamba kunofanirwa kuve kuchidzivirirwa kunze kwekunge kuri madikanwa, kana vafambi vakabaiwa jekiseni zvizere.
Masiki anokurudzirwa kune vanhu vakabaiwa majekiseni munzvimbo dzenzvimbo dzekunze kudzikisa kupararira kwemusiyano weDelta. Vanhu vasina kuvharirwa vanofanira kuramba vachifukidza munzvimbo dzeruzhinji.
Kuunganidzwa kwemukati kunofanirwa kudzivirirwa nevanhu vasiri veimba iripedyo, kunze kwekunge vabaiwa zvakakwana.
Zvikoro zvinokwanisa kupa zvakachengeteka mu-munhu kudzidza chete kana aya matanho ekudzivirira hutachiona aripo.